सुजिताको पो.ष्टमा,र्टम रिपोर्टले झन अन्यौलता बढायो ? पहिलो पटक शव देख्ने मान्छे यस्तो भन्छन् (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
सुजिताको पो.ष्टमा,र्टम रिपोर्टले झन अन्यौलता बढायो ? पहिलो पटक शव देख्ने मान्छे यस्तो भन्छन् (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ २३, २०७८ समय: १६:४४:४४
काठमाडौ । चितवनमा ह,रा,एको ९ दिन पछि ह,रा,एकी सुजिता भण्डारीको श,व च्याउ खो,ज्न जंगल गएकाहरुले पहिलो पटक देखेका थिए । एक जना सिताराम चेपाङले सुजिताको श,व देखेका थिए । उनी फलफूल ब्यापारी पनि हुन् । आँप बेचेर सकेपछि अब च्याउ खोज्नु जाुनपर्यो भनेर जंगल आएको थिए । जंगलमा च्याउ खोज्दै थिए । दिउसोको त्यस्तै ४ वजेको थियो होला ।
म च्याउ खोज्दै थिएँ गन्ध आयो, के रहेछ भनेर सोचेँ । पछि नजिक आएर हेर्दा टा उ को देखेँ पछि घुमेर अर्को तिरवाट हेदा पुरै शरिर देखे । पछि म छिमेकी सोमबहादुर दाईलाई गएर सबै कुरा सुनाएँ । उनले भने, दाईले अरु सबैलाई खबर गरिदिनुभयो प्रहरी आएर यहाँ हेर्दा करिब रातीको १० वजेको थियो ।चितवनकी सुजिता भण्डारी ह,रा,एको ९ दिन पछि मृ त फेला परेकी थिइन् । उनको घटनाको यथार्थ छानविन माग गर्दै स्थानिय र आफन्तले आन्दोलन जारी राखेका छन् । अवस्था विग्रन नदिन उनको घर आसपासको क्षेत्रमा स्थानिय प्रशासनले क, x र्फ्यु आदेश जारी गरेको छ ।
क, र्फ्यु बुधवार साँझ सम्मका लागि लगाइएको छ । सुजीताको पोष्टमार्टम रिपोर्ट आएको छ । तर त्यो रिपोर्टले थप अन्यौलता बढाएको छ । पोष्टमार्टम रिपोर्टमा उनको मृ,त्युको कारण खुल्न सकेन । उनले आफै यस्तो निर्णय लिइन् वा उनको मृ,त्युमा अरु कसैको हात छ भन्ने कुरा पोष्टमार्टम रिपोर्टमा नदेखिएको हो । चिवतनको एक सामुदायिक वनमा उनको शव फेला परेपछि पोष्टमार्टमका लागि त्रिवि क्षिण अस्पतालमा पोष्टमार्टम गरिएको थियो ।
पोष्टमार्टममा संलग्न चिकित्सकले रिपोर्टमा उनको घटनाको कारण यहि नै हो भन्ने प्रमाण दिने खालको कुनै संकेत नदेखिएको जनाएका छन् । उनको शरिरको भित्र र वाहिर कुनै चो ट देखिएको छैन । पाठेघर खाली छ भने कुनै घा उ छैन । त्यसैले जx वx र जx स्ती को कुनै सं,केत पनि देखिएको छैन ।त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डाक्टर गोपाल चौधरीका अनुसार अब उनको घटनाको यथार्थ थाहा पाउन भिसेरा परिक्षण गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि आफुहरुले नमुना दिएको र प्रहरीले त्यसको परिक्षण गर्ने उनको भनाई
Last Updated on: July 7th, 2021 at 4:44 pm